JECHOOTA MOGGOYYAALEE KAN AFAAN OROMOO: KUTAA AFRAFFAA -
Afaan Oromo Article | Posted By: bakkalcha (08/29/13) Views: 3928
Afaan Oromoo afaan baldhaa, afaan badhaadhinaan gonfamee fi afaan hedduu miidhagaa tahuu isaa, deddeebisee bakka addaddaatti ibseen jira. Ani kana jechuuf, waanan argeetoo qalbeeffaddheefi malee, lafumaa ka’een miti! Mee isan jedhu kana mirkaneeffachuuf, bakkuma jirtan san irraa ka’aatii waa qalbeeffachuuf carraaqaa! “Afaan kiyya nan beekawoo” jedhaniitoo taa’uun, homaa nama hin fayidu. Dhugaa dha; afaan abbaa keessanii ni beektu. Ammoo, kun callaan gayaa hin tahu. Isa beektan san irratti guyyum guyyaan dabalachuutu daran mishaa taha. Isin beekumsa afaan keessanii gabbifachaa yoo deemtan, Oromoota biraatillee waa ida’aa, achumaanis afaan kana irra caalaa gabbisaa, irra caalaas dilbeessaa deemtu jechaa dha. “Kun xiqqashoo dha; kun maal dhimma baasa?”, jettanii dhiisuu hin qabdani. Isuma isin “xiqqashoo dha” jettan san keessaas, waan hedduu barachuu dandeenya. Yeroo ammaa barreeffatoonni addaddaa baay’inaan bawuun, Afaan Oromootii sonaan barbaachisaa dha.
8) warakkaba* – waca, iyya
13) shiggiree – feellaa (“safety razor”)
16) gaagee – qartee (“dwarf”)
* Warakkabuu = wacuu, iyyuu; warakkabsiisuu = waccisiisuu, iyyisiisuu; warakkabaa = wacaa;
warakkabduu = waccuu, iyyituu — faa!
** Sharaquu = miiccuu; sharaqamuu = miiccamuu; sharaqsiisuu = miccisiisuu; sharaqachuu = miiccachuu — sharaqaa/ sharaqxuu = miiccituu; sharaqqii — faa!
**** shufuruu = shamuu; shufursiisuu = shamsiisuu, tortorsuu; shufursiisaa/ shufursiiftuu = shamsiisaa/
shamsiiftuu — faa!
***** Quyyifachuu = dibachuu; quyyifachiisuu = dibachiisuu; quyyifamuu = dibamuu; quyyifachiisaa =
dibachiisaa; quyyifamaa = dibamaa — faa!